Kismaayo oo ku biirtay wareegga 3-aad ee tartan aqooneedka | Somali National Television - sntv.so
Home BENAADIR Kismaayo oo ku biirtay wareegga 3-aad ee tartan aqooneedka
Kismaayo oo ku biirtay wareegga 3-aad ee tartan aqooneedka
Muqdisho (SNTV)- Habeenkan caawa ah waxaa ku wada ballansanaa tartan aqooneedka bisha Ramadan degmooyinka xeebaha dhaca Xamar-weyne & Kismaayo oo ka kala tirsan goballada Benaadir & Jubbada-Hoose.
Tartameyaasha Degmada Xamar-weyne ee Gobolka Banaadir waxaa la weydiiyey 7- Su’aal, waxa ay ka jawaabeen Labo su’aal, mana jirin wax ka faa’iideysi ah oo ay heleen, wadarta guud ee dhibcaha tartameyaasha Degmada Xamar-weyne ay heleen waxay noqotay 4- dhibcood.
Tartamayaasha Degmada Kismaayo ee Gobolka Jubbada Hoose waxaa dhankooda la weydiiyay 7- su’aal, waxa ay ka jawaabeen afar su’aal, mana jirin wax su’aal oo ay ka faa’ideysteen, wadarta guud ee dhibcaha ay heleen tartameyaasha Degmada Kismaayo waxay noqotay 8-dhibcood.
Tartamayaasha Degmada Kismaayo ee Gobolka Jubbada Hoose ayaa caawa u soo gudbay wareegga saddexaad ee tartanka, halka tartamayaasha Degamda Xamar weyne ay ku biirtay degmooyinka ku haray wareegga 2-aad.
Tartanka ay tabineyso warbaahinta Qaranka isla markaana uu taaba gelinayo maamulka gobalka Benadir waxaa habeen dambe foodda is dari doono, tartamaayasha degmooyinka Boosaaso & Deyniile oo ka kala tirsan Gobollada Bari iyo Banaadir, waana habeenka ugu dambeeyo wareegga labaad ee tartanka.
Previous articleGuddoomiyaha Gobolka Banaadir oo Booqday Qaar kamid ah Xarumaha Maamulka Koonfur Galbeed ee Baydhabo
Next articleQaraxyo Foolkaano horleh oo hakad-geliyay howsha baadi goobka Guatemala iyo 192-qof oo lala’yahay